Telefónica kushamisika uye kufambira mberi ingangoita 5% | Ehupfumi Zvemari
Telefónica kushamisika uye kufambira mberi ingangoita 5%
Imwe yenhau dzakasimba dzakagadzirwa muvhiki rino rakakomba rave iro rakakosha, uye panguva imwecheteyo, kukwira kusingatarisirwi mumasheya eTelefonica. Kamwe kuzivikanwa kuti kwave kune chibvumirano maererano ne Brexit pakati peGreat Britain neEuropean Union, pamwe neItari, inogona kusvika mukufungidzirwa mukuwedzeredzwa kwemabhajeti ayo akajairika. Idzi nhau dzakagara zvakanaka kwazvo neSpanish stock exchange uye kunyanya nekambani yekuratidzira mune yefoni uye yekutaurirana chikamu.
Mukati meiyo yakasarudzika indekisi yemari yenyika, iyo Ibex 35, pane anokunda anomira pamusoro pemamwe maitiro. Izvo hazvisi zvimwe kunze kwekudzikira kuri kuita Telefónica kusvika mazuva mashoma apfuura ayo akaratidzira kuonga mukukosha kwayo mumusika wemari ungangoita 5% mukati meiyi inopfuura vhiki inonakidza iyo iyo musika wemasheya unoti kuonekana nemwedzi waNovember. Zvakanaka, chimwe chezvinhu zvakajeka zvinokonzeresa chiito ichi chakasimba pamapuratifuru epasi nekuda kwetarisiro inogadzirwa pakati pevatengesi ne kutengeswa kwemidziyo muCentral America. Izvo zvave zvakagamuchirwa kwazvo nhau kubva kune vese vamiririri vanoshanda mumusika wemasheya.
Kune rimwe divi, uye sezvazvinoonekwa mune akasiyana masisitimu enhau, iyo yenyika telecommunication kambani inogona pinda tune 2.000 mamiriyoni yemamiriyoni zvakafanana. Uchave nehunhu hwakanaka kwazvo pamhedzisiro yemaakaunzi ako ebhizinesi. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha. Hazvishamise kuti kwave kuri kukosha kweIbex 35 iyo yakakwira zvakanyanya Muvhuro wekupedzisira, kunyangwe pamusoro pemapoka makuru emari.
1 Telefónica: iyo nhau inoifarira
2 Nzira yemayuro pamugove
3 Ivo vanokoshesa yavo yakatarwa mutengo pa9 euros
4 Iko kukosha kwacho kunogona kuwira mberi here?
5 Maitiro ane kukosha uku
6 Kuita bhizinesi
Telefónica: iyo nhau inoifarira
Ichokwadi kuti mashandiro svondo rino nereferensi telecom yakawedzeredzwa nekuita kwakanaka kweakanyanya mareti emusika wemasheya. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti Muvhuro wapfuura iyo Ibex 35 yakavhara panosvika mazana mapfumbamwe e9.100, mushure mekukoshesa ne1,96%. Nepo pane zvinopesana, iyo Matunhu eItaly yakakwira zvakanyanya, kunyanya 1,45%, iyo Ftse 100 yakazviita ne1,20% uye iyo Cac 40 yeFrance yedu yakavakidzana zvishoma zvishoma pane 1%. Kushamisiko kwevakawanda vevashambadzi vadiki nepakati.
Nezve kambani yekuSpanish yekufona, yanga iri nyaya yechimwe chinhu chinosvika munhau. Hazvishamise kuti Dublin Stock Exchange (Ireland) yakasimbisa kuti Telefónica yaendesa chirongwa che kubhadhara chikwereti kuti yanga iine parizvino pafloor yeLondon, zvichipa kusava nechokwadi kunokonzerwa nekubuda kweUnited Kingdom kubva kuEuropean Union (EU). Urongwa uhu hwasvika pachiedza cheveruzhinji uye hunokanganisa chimbo chechikwereti cheiyo chikamu cheTelefonica Emisiones, yakakosheswa pamamirioni makumi mana emamiriyoni euros uye ayo, kubva zvino zvichienda mberi, achave akanyorwa pamusika wemasheya weDublin.
Nzira yemayuro pamugove
Chero zvazvingaitika, izvo zvaakawana kwave kuri kumisa kutengesa kwake iyezvino uye izvo zvakamutungamira kuti atore padhuze kusvika makumi maviri nemaviri euros pamugove. Chikamu chisina kumboonekwa kune vazhinji, asi makore mazhinji. Parizvino iri kutengesa kuMadrid stock exchange pa7,70 euros pachikamu, kunyangwe chiri chokwadi kuti inofanirwa kugaya uye kuenzanisa kuwedzera kukuru svondo rino. Iko kuri kurova kuti izvi zvakagadzirwa zvine rakakura vhoriyamu yebhizinesi. Uye chinhu ichi chinopa kuvimbika kukuru kune izvi zvinowedzera mune imwe yeanoremekedzwa kukosha kweSpanish equities.
Kunyangwe pane zvinopesana, kune vazhinji vashoma uye vepakati varimari avo vakakurudzirwa kuvhura nzvimbo munzvimbo ino pamberi pa mitengo yakaderera iyo yaitengesa nayo. Kwete zvisina maturo, vamwe vaongorori vezvemari vaipa zano svondo rapfuura kuti yakwana nguva yekudzokera pazvinzvimbo zvenhare yenyika. Mupfungwa iyi, hazvishamise kuti maoko akasimba emusika akaunganidza mazita mazhinji pakupera kweChishanu chevhiki rapfuura. Icho chinoziva nezve izvo zvinogona kuitika mazuva apfuura uye mushure mevhiki.
Ivo vanokoshesa yavo yakatarwa mutengo pa9 euros
Kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa panguva ino kuti mutengo wakanangwa wekambani yakanyorwa muzvikwata wakakomberedza 9 euros pamugove. Izvi, chero zvazviri, hazvireve kuti zvichazadzisa icho, asi zvinopesana, fungidziro yakapihwa nevamiriri vezvemari kuita mashandiro. Iko pane imwe nguva kana imwe iyo inogona kutora pamitengo iyi iyo inotsanangurwa semutengo wekutarisirwa uye inoongororwa nguva nenguva.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kutariswa kuti uyu mutengo wemusika uyo kwete nguva yakapfuura yakatengeswa padhuze padyo nematanho e14 euros pamugove. Iwo mutengo usingatarisi kuti unozosvika pairi zvakare, kunyangwe zvaizowanikwa mune yepakati kana yakareba. Chinangwa muchidimbu ndechekusvika 9 kana 10 euros, iyo inomiririra zvinopfuura gumi muzana seanogona ekudzokorora kubva panguva ino. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Iko kukosha kwacho kunogona kuwira mberi here?
Chero zvazvingaitika, mumwe wemibvunzo inozvibvunzwa nevashambadzi vadiki nepakati ndeyekuti vachiri kuchengetedza here marg inodonhedza mutengo wayo. Zvakanaka, zvese zvinoenderana nekuti misika yemakambani inochinja sei kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti zvirizvo, kana izvi zvisina kunaka, hapana mubvunzo kuti zvikamu zvekambani yekuSpanish yenhare inogona kudzikira. Kwete zvakawanda, asi zvirinani kuti uyedze sei rutsigiro rwazvino rwune 6,20 euros. Chero zvazvingaitika, iwo maonero evanoongorora zvemari ndeekuti zvakanyanya mukushanduka kwayo zvakatoonekwa, vachidzikisira nhau dzese dzakaipa dzavakagadzira mumwedzi ichangopfuura.
Ichokwadi, kune rimwe divi, kuti kudzikira kwemubereko wayo kwakatamba zvichipesana nekushanduka kwakanaka mumusika wemasheya. Mupfungwa iyi, hakuzovi nesarudzo asi kunyatsoteerera kune inotevera makota anowanikwa kuona kana iri nguva chaiyo yekuvhura zvigaro mune ino yakakosha kukosha kweSpanish equities. Kunyangwe kuburikidza nekutenga zvine hukasha semhedzisiro yemitengo yakanaka yairi kutengeswa parizvino. Kunyangwe inogona kudonha zvishoma mumwedzi iri kuuya.
Maitiro ane kukosha uku
Iko kune yakajairika dhinomineta mumasarudzo evanoongorora zvemari uye izvo ndezvekuti masheya ekambani yakanyorwa akanyanya kutarisirwa panguva ino ku kutenga pane kutengesa. Hazvishamise kuti ivo vari kutengesa pamutengo wakakosha mumutengo semhedzisiro yekucheka kwavo kwazvino mukukosha kwavo. Kusvika pakuti ivo vanonongedzera kuti haisi inomiririra mutengo chaiwo uyo kambani yekufona inofanira kupa sezvo yakamborwiswa nenzvimbo dzechi bearish zvine hukasha hukuru maererano nehukuru hwekufamba.
Naizvozvo, kuti ukunde rutsigiro runotevera rwuri padyo ne8 euros, ingangove inonakidza nzvimbo yekuvhura nzvimbo nechinangwa chekumirira kuwedzera kune 9 kana 10 euros uye kuita kuti kuchengetedza kubatsire mune isina kunyanyisa nguva yakareba yenguva. . Kwete zvisina maturo, njodzi dzinomhanyiswa nemakambani madiki nepakati nepakati hadzina kukwirira zvakanyanya uyezve idiki pane mamwe maitiro eIbex 35. Mupfungwa iyi, iyo equation pakati purofiti uye njodzi Iyo ndeimwe yemakwikwi zvakanyanya parizvino inopihwa neSpanish equities.
Chimwe chinhu chinofanirwa kugadziriswa mumavhiki ari kuuya icho chine chekuita nacho mafambisirwo emakambani echikamu. Hazvishamisi kuti zvinotarisirwa kuti panogona kuve nekutenga kukuru, sezvakaitika makore mashoma apfuura. Mupfungwa iyi, maziso ese ari paTelefonica iyo inogona kuita mashandiro ehumwe kukosha uye kwazvinogona kubatsira. Izvi pasina mubvunzo angave mashoko akanaka kune vashoma uye varipakati varimari vanogona kuona kwavo kudyara mumusika wemasheya kuwedzera.
Aya mafambisirwo emakambani aisazongonongedza nyika dzeEuropean nharaunda, asiwo rimwe divi reAtlantic. Iko basa rinoitwa naTelefonica rakakosha kwazvo, munyika dzakaita seBrazil neMexico. Mupfungwa iyi, inozotapurwawo nekushanduka kwemisika iri kubuda, mune imwe pfungwa kana imwe. Nezvayo kusagadzikana kwayo kuchanyatso kududzwa uye mutsauko pakati pemitengo yayo yepamusoro nepashoma ichawedzerwa. Chinhu icho pasina mubvunzo chinobatsira kuti mashandiro ekutengesa ave nani kune vese vanoita mari. Senzira nyowani yekuvandudza hupfumi kubva kune yakasarudzika maonero kubva ikozvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Telefónica kushamisika uye kufambira mberi ingangoita 5%
Ndeapi matanho akasarudzwa pazvinzvimbo zvipfupi?
Brexit neItaly zvichaenda kuruzhinji svondo rino